Kenya: Wasiirka arimaha gudaha oo maxkamadi xukun ku riday - BBC News Somali
Kenya: Wasiirka arimaha gudaha oo maxkamadi xukun ku riday
Garsoore ka tirsan Maxkamadda Sare ee Kenya ayaa ganaax lacageed oo midkiiba laba kun oo doolar ah ku xukumay saddex sarkaal oo sarsare oo ka tirsan dawladda Kenya, markii uu ku helay in ay maxkamadda quudhsadeen.
Wuxu sheegay in lacagtaa laga jari doono mushaharkooda, waxaanay kala yidhiin saddexda sarkaal: Wasiirka arimaha gudaha, taliyaha booliska iyo madaxa waaxda socdaalka oo iska dhego tiray amar maxkamadeed oo ahaa in la sii daayo siyaasiga mucaaradka ah ee Miguna Miguna.
Eedaysanayaashu ma ay hor tagin maxkamadda in kasta oo maxkamaddu dhawr jeer u yeedhay.
Miguna Miguna waxa uu sheegay in si joogto ah loo handaday, oo la garaacay ka dibna khasab lagu saaray diyaarad Dubai gaysay.
Af-hayeen u hadlay diyaaradda Emirates oo ah diyaaradda u qaaday Miguna Dubai oo BBC-du la xidhiidhay ayaa waxa uu yidhi "Kama hadalno arimaha socdaalka ee macaamiishayada. Emirates waxay had iyo goor u hogaansantaa sharciyada iyo xeerarka dalalka aanu u duullo. Waxa masuuliyadi naga saarantahay in aanu hubsano in qofka raacaya diyaaradahayagu sito oo na tuso dhamaan dhukumentiyada suurto gelinaya in qofku sifo sharci ah ku safro."